पाल्पा कांग्रेसकाे प्रदेश र क्षेत्रमा काे काे छन् आकंक्षीः जिल्ला अधिवेशन - Sero Fero News
पाल्पा कांग्रेसकाे प्रदेश र क्षेत्रमा काे काे छन् आकंक्षीः जिल्ला अधिवेशन
सेराेफेराेन्यूज प्रकाशित मिती - २९ कार्तिक २०७८, सोमवार
पाल्पा, कार्तिक २९
नेपाली कांग्रेसको अधिवेशनले जिल्लामा चहलपहल बढेको छ । निर्वाचनमा नेतृत्व चयनका विषयमा सदरमुकाम तानसेन र रामपुर नगरपालिका क्षेत्रभित्र आपसमा छलफल, भेला र वहस भईरहेका छन् ।
आगामी मंसिर ३ गते, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र अधिवेशन र मंसिर ६ गते प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशन हुँदैछ । जिल्ला अधिवेशन मंसिर १० गते हुने मिति निश्चित भएसँगै नेपाली काँग्रेस, पाल्पाकाे सभापति पदका लागि समेत छलफलहरू अगाडी बढेका छन् । मंसिर ३ गते हुने प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र १ (क) मा प्रदेश सभापतिका लागि भाेजेन्द्र प्रकाश ढकाल र राम बहादुर राना प्रतिस्पर्धी रहने आँकलन गरिएकाे छ । यहाँकाे अधिवेशन रामपुरमा हुने बताइएकाे छ । प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र १ (ख) मा युवराज पाैडेल, हेमराज अर्याल, धातानन्द बस्याल र कृष्ण भट्टराइ प्रदेश सभापति पदमा आकंक्षी देखिएका छन् । १ (ख) काे अधिवेशन भने कसेनीमा हुने बताइएकाे छ ।
प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र २ (क) मा सभापतिका लागि लक्ष्मी प्रसाद अधिकारी र कृष्ण आले आकंक्षीका रूपमा देखिएका छन् । यस क्षेत्रकाे निर्वाचन तानसेनकाे त्रिभुवन बहुमुखी क्याम्पस तानसेनमा हुने बताइएकाे छ । प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र २ (ख) मा रूक्मागत भट्टराइ र दमबहादुर कार्की अाकंक्षीकाे रूपमा देखिएका छन् । २ (ख) काे अधिवेशन रिब्दिकाेटकाे देउरालीमा हुने बताइएकाे छ ।
मंसिर ६ गते हुने प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशन क्षेत्र नं. १ काे लागि क्षेत्रीय सभापतिमा झमानराम मगर र बिष्णु बमरेल आकंक्षी रहेकाे बताइएकाे छ । क्षेत्र नं. २ का लागि क्षेत्रीय सभापतिमा मुक्तिराम जिसी, शंकर रायमाझि र यादवसिंह कार्कीकाे नाम चर्चामा रहेकाे छ ।
पाल्पाबाट ५३ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित समेत हुनेछन् । जिल्ला सभापति तथा जिल्ला कार्यसमितिकाे निर्वाचनका लागि समेत क्षेत्रबाट प्रतिनिधि हुनेपर्ने प्रावधानका कारण यस निर्वाचनलाइ महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएकाे छ । क्षेत्रीय निर्वाचनमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन हुन सके कांग्रेस जिल्ला सभापति पदका लागि समेत सहमति हुन सक्ने अपेक्षा गरिएकाे छ ।
पाल्पा कांग्रेसमा जिल्ला सभापतिका लागि आकाङ्क्षी को को ?
मंसिर २४–२६ मा काठमाडौंमा आयोजना हुने महाधिवेशनमा अहिलेसम्म १० जना नेताले नेतृत्वमा प्रष्टसँग आकांक्षा देखाएका छन् । सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री शशांक कोइराला, पूर्वउपसभापति प्रकाशमान सिंह, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र केन्द्रीय सदस्यहरू शेखर कोइराला, सुजाता कोइराला, रामशरण महत तथा कल्याण गुरुङले उम्मेदवारी दाबी गरिरहेका छन् ।
पाल्पाका १० मा एक पालिका र ८१ मध्ये एक वडामा महिला सभापतिः कांग्रेस अधिवेशन